Pomchi: Tilmaamaha Mulkiilaha ee Isku-dhafka Chihuahua Pomeranian - Taranka
Pomchi: Tilmaamaha Milkiilaha ee Isku-dhafka Chihuahua Pomeranian
Maxaa dhacaya markaan isku darno 50% sass iyo 50% ruuxa? Pomchi waa waxa dhaca.
KU naqshadeeye isku dhafan waa natiijo ka dhalatey Pomeranian iyo Chihuahua.
Istaagaa inta udhaxeysa 6-9 ”oo dherer ah, culeyskiisuna yahay inta udhaxeysa 5-12lbs, xirmadan yar waxay xambaarsan tahay shaqsiyad aad u weyn!
Pomchis, oo sidoo kale loo yaqaan Chiranians ama Chihuahua Pomeranian Mixes, waa geesinimo, madax adag oo kalgacal leh.
Aynu wax yar ka sii baranno iyaga, asalkooda iyo waxa loo baahan yahay in lagu daryeelo maalinba maalinta ka dambaysa.
Nooca Taranka Isku qas iyo inbadan
Ku Haboon Dadka waaweyn ama qoysaska leh carruurta waaweyn; ku habboon guryaha iyo guryaha magaalada
Cabir 6 - 9 ”dherer ahaan
Miisaanka 5 - 12 rodol
Nolosha qofka 12 - 15 sano
Kala duwanaanta Midabka Buluug & Tan, Madow & Tan, Sable, Fawn, Cream iyo Chocolate
Dabeecad Madax adag, debecsan, caqli badan, madaxbanaan, kalgacal, daacad iyo baaris leh
Heerarka Waxqabadka Ugu badnaan 30 daqiiqo maalintii
Isticmaalka Cuntada Maalinlaha ah Qiyaastii 40 kalori halkii lb miisaanka jidhka maalintii
Arimaha Caafimaadka ee Layaqaan Atrophy Retinal Progressive, Cataracts, Hypothyroidism, Suuxdin iyo arrimaha caafimaadka afka
Waa maxay Pomchi? Dulmarka Guud
Asalka Pomchi Dog
Waalidiinta Pomchi: Chihuahua iyo Pomeranian
Dabeecadda Pomchi iyo Shakhsiyadda
Sida Loo Daryeelo Isku-Darka Chihuahua Pomeranian
Sidee loo Quudiyaa Pomchi
Sida loo Tabobaro Pomchi
Dhibaatooyinka Caafimaadka ee la yaqaan
Muuqaalka Taranka: Koodhka, Midabka iyo Qurxinta
Pomchi's waxay leeyihiin shakhsiyad aad uga fog cabirradooda waalidkood Chihuahua (bidix) iyo Pomeranian (midig).
Eyga Pomchi waa natiijada ka dhalatay isku darka Chihuahua oo leh Pomeranian; laba eey oo saafi ah. Cabirka la midka ah ee taranka awgiis, biyo-xidheenka iyo shere way is-weydaarsan karaan.
Jiilka Koowaad Chihuahua Pomeranian mix waa 50% Pomeranian iyo 50% Chihuahua. Markii jiilalka ay sii socdaan, soosaarayaasha ayaa ku dhalan kara Pomeranian buuxa ama Chihuahua oo wata Pomchi, ama waxay abuuri karaan laba Pomchis. Fikradda taranka laba Pomchis waa in laga yeesho fikrad wanaagsan dabeecadooda suurtagalka ah, sidii aan ku sameynay eeyo saafi ah.
Iyada oo nooc isweydaarsi ah waligaa iskuma hubi kartid eeyga aad ku dambayn doonto. Waxaa laga yaabaa inaad ku dambeyso Pom ka badan Chi ama Chi ka badan Pom.
Isku-darka naqshadeeyahaani maahan eey saafi ah oo leh abtirsiin sidaas darteed looma aqoonsan karo koox weyn oo Kennel ah. Iyagu waa nashqadeeye naqshadeeye reer Pomeranian ah iyo Chihuahua .
Waxaa u aqoonsan Diiwaanka Hybrid ee Canine ee loo yaqaan Chiranian iyo sidoo kale Diiwaangeliyaha Canine Designer oo ah Pomchi isku-darka kalgacalka iyo madaxbannaanida ah ayaa helay dan joogto ah tobankii sano ee la soo dhaafay.
Caan ahaantooda darteed, qiimaha cunug ee loo yaqaan 'pomchi price puppy' wuxuu noqon karaa kudhowaad $ 950 sumad, laakiin, celcelis ahaan qiimaha wuxuu u dhexeeyaa $ 350 - $ 1,200 USD.
Sida dhammaan noocyada kala duwan ee caanka ah ay u sii kordhayaan, ayaa inbadan oo Pomchis ah waxay isku helayaan hoy, markaa samatabbixintu sidoo kale waa ikhtiyaar .
Cimriga Pomchi? Inta udhaxeysa 12 - 15 sano jir.
Pomchi Cabbirka Buuxda oo Weyn Waxaa loo kala saaray sidii nooc toy ah laga bilaabo 6-9 ”dherer ahaan.
Miisaanka Pomchi? Markaad bislaato inta udhaxeysa 5-12 lbs - dheddigga guud ahaan waa ka fududyihiin.
Qiimaha Pomchi? $ 350 - $ 1,200 USD eey kasta.
Chihuahua waa nin firfircoon, caqli badan oo feejigan. Cabbirkooda yar wuxuu gebi ahaanba khiyaaneeyaa shakhsiyaddooda ka weyn nolosha.
La soo noqoshada Aztec , waxaa loo maleynayaa in Techichi uu ahaa eeygii doorashada ee Toltec - markii Aztec ay qabsadeen Toltec-kii, waxay ku sifeeyeen Techichi wixii aan hada u naqaano Chihuahua.
Waxay ku noolaayeen wixii ka dambeeyay xilligii Toltec tiro aad u badan oo iyaga ka mid ahna waxaa helay Mareykanka Gobolka Chihuahua ; taas oo ah halka uu magaciisa ka helay.
Waxaa ku sharaxay Dhamaan Waxyaabaha Eeyaha oo dhan sida sassy, ​​uma baahnid wax intaa ka badan. Chi waa madax adag, soo jiidasho leh oo daacad ah. Dabeecad weyn oo ku jirta jir yar oo leh saxarada si ay ula mid noqoto terrier kasta!
Naadiga Kennel-ka Mareykanka wuxuu ku sifeeyay inuu yahay mid wax baara, geesinimo leh oo firfircoon Pomeranian waa qaraabo fog oo ka mid ah eeyaha Arctic Spitz (eeyaha lugaha leh).
Noocani wuxuu u mahadcelin karaa Boqorada Victoria, oo ka timid England, sida ay caan ugu tahay booqashadii ay ku tagtay Talyaaniga, jacayl ayay u qaaday iyaga waxayna si deg deg ah ugu keentay Ingiriiska. Boqoradda Victoria ayaa sii waday inay muujiso iyada Poms at Crufts , abuurista xukun boqortooyo.
Poms waxay saaxiibbo daacad u ahaayeen Thomas Edison, Mozart iyo Michelangelo.
Feejignaan iyo caqli badan, nimankan yar yar ee feeyiga ah ayaa ah eeyo aad u ilaalinaysa. Firfircoon oo firfircoon, waxay ku raaxaystaan ​​firfircoonaan, laakiin uma baahna maylal aan dhammaad lahayn oo socod ah.
Marka waxaan ka gudbeynaa geesinimada, feejignaanta iyo caqliga leh Pom oo leh sassy, ​​madax adag iyo feisty Chi oo maxaan helnaa? Pomchi leh dabeecad lagu kabo. Xaqiiqdii wuu kaa ilaalin doonaa firfircoonida iyo madaddaalada.
Standoffish waxay u badan tahay ereyga ugufiican ee lagu sifayn karo isku dhafka Pomchi ee shisheeyaha. Iyagu waa feejigan yihiin, wax weyddiiyaan waana hubaal inay kuu sheegi doonaan haddii wax meesha ka jiraan. Milkiilayaasha qaar ayaa la halgama rabitaankooda ciyey kuna sifeeyaan mid xad dhaaf ah.
Ma aha oo kaliya inay ku qeyliyaan dhawaaqyada, garaaca ama biibiile daroogada, Pomchis sidoo kale wuu ciyi doonaa haddii keligiis laga tago muddo dheer. Dabeecaddooda kalgacalka leh awgeed, uma adkaysanayaan inay keligood ahaadaan:
Waxay u nugul yihiin inay la silcaan walaac kala soocid ah.
Pomchis wuu calalin doonaa , xoq, jilif, qod, kaadi iyo nadiifin marka culeys jiro.
Iska ilaali inaad uga tagtid iyaga muddo dheer adoo weydiinaya asxaabtaada ama qoyskaaga inay soo baxaan ama ay raadiyaan socod ey.
Markay la joogaan qoyskooda, Pomchis waa eey aad u jecel, sida waalidkood Pomeranian.
Waxay u dulqaadan karaan dadka waawayn oo aad uga fiican carruurta. Noocan caruusadda naqshadeeye wuxuu ku habboon yahay dadka waaweyn oo keliya guryaha ama qoysaska carruurta waaweyn leh sababtoo ah cabbirka yar ee ay ku ciyaaraan. Waxaan soo sheegnay jacaylka ay u qabaan inay ku foorarsadaan fadhiga - si aan runta u sheegno, waa halka aad ka heli doontid inta badan.
In kasta oo ay yihiin dabeecad firfircoon oo baaritaan leh, uma baahna saacado jimicsi. Aad ayey u faraxsan yihiin ku dhex ordaya guriga ama ardaaga. Socodyada qiyaastii 30 daqiiqo waa ku filan yihiin, si kastaba ha noqotee, dabeecaddooda madax-bannaan waxay ka tagi kartaa xusuusintooda wax ka yar sida loo jecel yahay - ku hay xadhig markii ay socdaan.
Haddii bulshada dhexdeeda laga bilaabo da 'yar, Pomchis wuxuu u muuqdaa inuu si wanaagsan ula qabsado xayawaanka kale, laakiin dabeecad xumadooda awgeed, waxaa lagugula talinayaa inaad kormeerto isdhexgalka. Fiiri luqadooda jir in la saadaaliyo wixii dhibaato ah ee iman kara
Dabeecadooda madaxbannaan, oo dooneysa feejignaan, waxay tuuraysaa waxyaabo ay tahay in laga fekero markii la daryeelayo bucshiradaas jecel.
Sida kuwa kale Chihuahua eeyaha qas isku darkaani wuxuu ku habboon yahay guryaha dadka waaweyn keliya, ama qoysaska carruurta waaweyn leh.
Labadaba Pomeraniyiinta iyo Chihuahuas waxaa lagu yaqaan inay cunaan ciil; waxaa macquul ah in Pomchi-kaaga uu dhaxlay tayadan.
Waxay kugu qaadan kartaa xoogaa waqti inaad kuhesho raashin ku habboon saxaradaada, la hadal dhakhtarkaaga xoolaha ama waxaad uheshaa dhakhtar ku caawiya haddii aad dhibtoonayso.
Hubso in cuntada aad quudineysid ay la kulmeyso eeygaaga shuruudaha nafaqada maalin kasta , wuxuu u baahan doonaa:
1.6 garaam oo dufan ah kiilo kasta oo miisaanka jidhka ah
2.62 garaam oo borotiin ah kiilo kasta oo culeyska jirka ah
Hubi calaamadaha cuntadiisa inay waafaqayaan shuruudahan. Wuxuu cuni doonaa celcelis ahaan 40 kalori halkii lb ee miisaanka jirka maalintii, markaa haddii miisaankaaga culeyskiisu yahay 8 lbs, wuxuu u baahan doonaa:
320 kalori maalintii
5.8 garaam oo dufan ah maalintii
9.5 garaam oo borotiin ah maalintii
Waa wax fudud oo fudud eey kasta culeys la saaro , eeyaha yar yar ayaa reeban. Waxaad u adeegsan kartaa shaxda koritaanka eeyaha ee hoose si aad u maareeyso miisaankooda:
Miisaanka 8 toddobaad
Cabbirka dadka waaweyn
13oz 2.5 lbs
1lb 3 lbs
1.18 lbs 3.5lbs
1.34 lbs 4lbs
Isku day inaad iska ilaaliso quudinta miisaska miiska maadaama ay ka sii adag tahay in lala socdo inta uu cunayo. Haddii aad rabto inaad ku darto cunnooyinka aadanaha ee caafimaadka leh cuntadooda, isticmaal miro caafimaad leh, oo ku beddel qaar ka mid ah gunnadiisa maalinlaha ah si aad ula qabsatid.
Sidaan soo sheegnay, nimankani waxay si aad ah ugu hooseeyaan shuruudaha jimicsiga.
Aad ayey ugu faraxsan yihiin socodka guriga ama ardaagga, laakiin, waxay qayb ka yihiin socodka agagaarka daarta. 30 daqiiqo way fiicnaan laheyd, sidaas darteed, sababtaan awgeed, waxay si fiican ugu habboon yihiin guryaha iyo guryaha magaalada.
Dabeecaddooda macangagnimadu waxay u horseeddaa milkiilayaasha badankood inay ku sii hayaan xadhigooda; dib u xusuusintoodu waxay reebtaa waxyaabo badan oo la doonayo.
Isku darka 'Pomchi' ayaa ah midka ugu farxadda badan ee adiga kula jooga, haddii ay tani tahay guryo ka sameysan guriga, dhex fadhiista daaradda ama la qabsiga barnaamijyadaada TV-ga!
Sida eeyaha oo dhan, saxaradan ayaa sida ugu fiican uga jawaab celisa abaalmarin tababar ku saleysan (yacni xoojin togan).
Markuu u dhaqmayo sida aad adigu rabto, u ammaan oo u abaal mari. Cunnooyinka iyo dawooyinka carruurtu ku ciyaaraan ayaa qumman Hadduu sifiican uga jawaabo abaalmarinta cuntada, ku beddel qaar ka mid ah gunnadiisa maalinlaha ah si aad ula jaanqaado. Waxa kale oo aad isku dayi kartaa ciyaar iyo amaan sida abaalmarino.
Wuxuu baran doonaa in markuu u dhaqmo qaab cayiman, wax wanaagsan ay dhacaan. Wuxuu markaa u badan yahay inuu ku celiyo dhaqankaas; tan waxaa loo yaqaan dhaqanka hawl wadeenka waa sida eydu wax u bartaan.
Sababtoo ah dabeecadda madax adag ee waalidkiis, gaar ahaan Chihuahua, Pomchi way adkaan kartaa in la tababaro adag; samirku waa furaha!
Waxaa si fiican loo aasaasay in hababka tababarka ka leexashada ahi ay abuuri karaan ugana sii dari karaan dabeecadaha dhibaatada leh eeyaha, sidaas darteed iska ilaali isticmaalka ciqaabta .
Sidii aan horey u soo sheegnay, ciyeygu wuxuu dhibaato ku noqon karaa isku dhafkan. Waxaan haynaa talooyin waxtar leh oo aan ku maareyn karno qeylada xad dhaafka ah:
Ha ku qaylin eeygaaga - waxay uun noqoneysaa tartan yaa u qaylin kara badanaa.
Fahmaan waxa keena qeylada. Haddii uu ku ciyoonayo dadka ag maraya, ha u oggolaan dibadda in aan la ilaalin. Haddii uu ka daaqo daaqad gaar ah, u kaxee qol kale ama xir daahyada / daahyada.
Iska daa iska ciyey oo abaal mari isla marka uu istaago. Tani waa dhaqanka aad rabto inuu ku celiyo.
Bar amarka 'sariirta aad' . Ku tuur sariirtiisa amarka 'sariir' ama 'seexo,' haddii uu ku ciyo martida ama kuwa boostada soo dira, waxaad u adeegsan kartaa amarkan si aad uga saarto xaaladda.
Ka dhig isaga mid kacsan - eeyga caajiska ah ama wareersan waxay u badan tahay inuu ciyo.
Waxa kale oo aad fursad fiican u taagan tahay inaad iska ilaaliso qaylada xad dhaafka ah haddii uu bulshada dhexdeeda ka dhex muuqdo da 'yar. Ka dhig fadhiyada isdhexgalka bulshada kuwo gaagaaban oo kacsan, kaliya soo bandhig dhowr khibradood markiiba.
Sida waalidkood, eeyga Pomchi wuxuu u nugul yahay arrimaha caafimaadka qaarkood oo ay ka mid yihiin:
Atrophy Retinal Horusocod ah - kani waa marka uu sii xumaado xuubka xuubka 'retina' kaasoo sababa araga oo lumiya iyo ugu dambeyn indho la'aan.
Indho-beel - indho-beel waa indho-beel indhaha muraayadaha indhaha taasoo keenta araga oo luma waxayna u horseedi kartaa indho la'aan.
Hypothyroidism - halkan qanjirka 'thyroid' ayaa ku guuldareysta inuu soo saaro hormoonno ku filan. Astaamaha ugu caansan waa timo luminta, daadinta xad dhaafka ah, dhaqdhaqaaqa oo yaraada, miisaanka oo kordha iyo jaakad caajis ah. Badanaa waxaa lagu daaweyn karaa daawo.
Cudurka suuxdinta - oo ku badan Chihuahua sababo la xiriira culeyskooda jirka oo hooseeya, nashqadeeyahaan naqshadeeye ah ayaa lagu yaqaan inuu ku xanuunsado qalal.
Arimaha caafimaadka afka - oo caan ku ah noocyada caruusadaha, waligood ma lumiyaan ilkahooda yar. Ilkahooda qaangaarka ah ayaa wali riixaya waxayna keenaan ciriiri ilkaha ah. Ilkaha dheeraadka ah ee afka dartiis, dhammaantood way is xoqayaan, iyagoo xiran dhaldhalaalka.
Haddii aad wax walaac ah ka qabto caafimaadkaaga guud iyo eeygaaga, la hadal dhakhtarkaaga xoolaha.
Badanaa waxaa lagu sifeeyaa dawaco sida muuqaalka oo kale, Pomchi wuxuu u ekaan karaa Pomeranian badan Chihuahua ama Chihuahua ka badan Pomeranian - runti weligaa ma ogaan doontid waxaad ku dambayn doonto isutallaabta iskutallaabta.
Waxay ku yimaadaan noocyo kala duwan oo midabbo ay ka mid yihiin madow iyo cagaar, suuf, fawn, shukulaato iyo buluug iyo cagaar; si kastaba ha noqotee, wali maanaan arag pomchi madow oo saafi ah. Midabada ugu caansan waa fawn iyo sable.
Cabbir yar, oo u dhexeeya 5 - 12lbs oo culeys ah oo taagan ilaa 9 ”dherer ahaan, ragga guud ahaan way ka weyn yihiin dumarka. Waxay u muuqdaan kuwo leh dhago jilicsan, dhago leh dawaco caan ah sida sanka.
Nooca koofiyadu wuu kala duwan yahay, waxay yeelan karaan waqti dheer, gaagaaban, cufan, khafiif ah, laba jibbaaran ama hal koodh ah oo leh daadinta pomchis ma aha arrin weyn. Si kastaba ha noqotee, labadeeda waalidba waxay leeyihiin laba xilli oo xilliyeed ah; haddaba tan kafiir naqshadeeyahaaga sidoo kale kafilo.
Caddaynta joogtada ahi waxay ka ilaalin doontaa gunti jaakad iyo gogol dhaaf. Hubi dhagahooda iyo indhahooda markay is qurxinayaan sida aan ognahay inay ku dhibtoodaan indhahooda.
Tijaabiyey digniintan, caqliga iyo xasaasiga ah? Xaqiiqdii wuu ku ilaalin doonaa inaad feejignaato oo aad feejignaato. Isaga oo aan firfircoonayn, wuxuu si farxad leh ugu ordi doonaa guriga iyo barxadda, isagoo socod gaaban ku mari doona daarta.
Pomchi-ku wuxuu si fiican ugu habboon yahay guryaha iyo guryaha magaalada; dadka qaangaarka ah kaliya guriga ama qoyska leh carruurta waaweyn ee fahamsan in eeyadu sidoo kale u baahan yihiin booskooda.
Waa ilaaliye cajaa'ib leh, nimankan ayaa caan ku ah ciilkooda, gaar ahaan haddii laga tago. Waxay la joogi karaan dadka shisheeyaha ah, laakiin markii ay ku aqbalaan, waxay kuu noqon doonaan eeyga dhabtaada nolosha.
Markii la dhexgalo da 'yar iyaga oo si fiican ula qabsanaya xayawaanka kale; kaliya xusuusnow dabeecaddooda geesinimada leh iyo madaxbannaanida oo iska ilaali wixii masiibooyin ah ee dhici kara markaad la kulanto xayawaanka iyo eeyaha kale.
Saaxiib feisty ah, wuxuu noqon karaa 50% Pom iyo 50% Chi laakiin isagu waa 100% daacad ah oo jecel! Noo soo sheeg waxa aad u malaynayso aagga faallooyinka ee hoose.
Eydu ma cuni karaan Cananaaska? Shan Sharci oo ay tahay inaad ogaato
Dorgi: Ma dooneysaa inaad la mid noqoto boqoradda? Soo hel isku darka Corgi-Dachshund!
Magacyada eyda ugaarsiga lab ee shaybaadhka
pitbull Terrier shaybaarka isku dhafka ah ee eeyaha
Eeyadu way faraxsan yihiin markay dhoola cadeynayaan
waa maxay nooca pitbull ugu fiican
madaxa tufaaxa timaha dheer chihuahua